Dagaal cusub oo Baraha Bulshada ka dhex Qarxay Taageerayaasha Farmaajo iyo Xasan Sheekh - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Dagaal cusub oo Baraha Bulshada ka dhex Qarxay Taageerayaasha Farmaajo iyo Xasan Sheekh - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dagaal cusub ayaa Baraha bulshada ku dhex maraya taageerayaasha madaxweynihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo taageerayaasha Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud.
Dagaalkan oo aan qaboobin tan iyo ololihii doorashada ayaa mar kale soo laba kacleeyay markii taageerayaasha Farmaajo ay bilaabeen qorshe ay sheegeen inay Guri ugu dhisayaan Farmaajo oo Hoy la’aan ku heyso Muqdisho, markii uu degay Guri kiro ah.
Taageerayaashii waaweynaa ee Farmaajo ee Baraha bulshada ka difaaci jiray Farmaajo, isla markaana ku caan baxay aflagaadeynta madaxda kale ee dalka ayaa qorshahan la yimid, iyadoo Farmaajo ula baxay ‘Madaxweyne shacab’ waxayna arrintan soo jiidatay cambaareyn ka timid taageerayaasha madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud.
Xalay ayey kooxda Farmaajo baahiyeen Akoono laga furay Bankiyada dalka, kuwaas oo ay ku qoran yihiin magacyada Agaasimihii hore ee Villa Somalia Maxamed C/llaahi iyo Agaasimihii Warfaafnita C/rashiid , waxaana ay bilaabeen qaaraan loo ururinayo Gurriga loo iibinayo ama Muqdisho looga dhisayo Farmaajo.
Taageerayaasha Xasan Sheekh ayaa si weyn u cambaareeyay tallaabadan, iyadoo ku tilmaamay mid aan loo baahneyn xilligan oo ay dalka abaaro ka jiraan in dadka Soomaalida lacag looga urursado qaab sharci darro ah.
Xildhibaan iyo Wasiir hore Axmed Macalin Fiqi ayaa yiri: “Waxaan hey’adaha Dawladda ee ku shaqada leh u soo jeedinaynaa in ay ka hortagaan ”ololaha marin-habaabinta ee lagu dhisayo guriga dhibka قصر الضرار” cidda akoonadu magaceeda ku qoran yihiinna sharciga la horkeeno, waayo waxay umaddu la socotaa in ninka magaciisa lagu aruurinayo lacagtaas uu deggan yahay hadda guri ku kiraysan $30 kun”.
Axmed Fiqi ku dooday in iyadoo ay dalka ay ku habsatay abaaro ba’an oo qiyaastii 6 malyan oo qof la’yihiin asaasiyaadkii nolosha, madaxweynaha qarankuna uu wado dadaalo gurmad loogu raadinayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, inay arxan la’aan tahay in lagu garab furo mashruuca marin habaabinta iyo arxan la’aanta isugu jira.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Banaadir Cali Yare oo u jawaabay Axmed Macaliin Fiqi ayaa isna yiri: “Mid taageersan in la qabto Xaflad Caleemosaar oo ay ku baxayaan adduun gaaraya 2 Malyuun oo Dolar, oo taageersan Safar maamulo lagu tagayo oo ay ku baxayso 1.5 Malyuun oo dollar. Rag 8 Malyuun oo Dollar Laaluush ku bixiyay taageersan, welina taageersan dad ku eedeysan boob hanti dadweyne, oo taageersan in 50 qof oo taageerayaal ah UK iyo Mareykan laga soo daadgureeyay si ay dowlada ugu mashxaradaan, oo taageersan mashaariic iyo magacaabisyo loo sameystay si gargaarka dadka abaareeysan loo boobo ayaa ku leh maxay Shacabku ugu Mahanaqayaan Madaxweyne Farmaajo?.. Abaartana waa bixineynaa, Abaalkana waa la celinaa”.
Labadan kooxood ee ku dagaalamaya Baraha Bulshada waxay u baahan yihiin inay joojiyaan ololaha doorashada ee ay weli ku jiraan, loona jeesto gurmadka abaaraha oo xaalad xun maraya, waa in la joojiyaa Xafladaha iyo hantida shacabka ee siyaasadda looga faa’iideysanayo.
Kooxda cusub ee taageereysa Madaxweyne Xasan Sheekh waxay gebi ahaan is moogeysiinayaan dhaqdhaqaaqa madaxweynaha iyo wax kasta oo uu sameeyo, iyagoo keliga ilaalo ka haya kooxda ay xukunka talada uga adkaadeen ee Farmaajo.
Dagaalkan wuxuu guud ahaan hareeyay baraha bulsahada oo dhan, waxayna taageerayaasha Farmaajo u muuqdaan inay sii wadaan ololehoodii lagu yiqiin iyadoo Qofnimada Farmaajo ay kala weyn tahay ‘Qaran”-kii, waxaana laga cabsi qabaa inay arrintan soo farageliso Hay’adda NISA, taasoo bilow u noqon doonta isku dhacii ugu horeeyay ee toos ah.
Previous articleMaamulka K/Galbeed oo shaqadii ka joojiyey Guddoomiyihii Afgooye iyo Arrinta sababtay
Next articleMuxuu yahay ballanqaadka culus ee Qoorqoor ka helay Madaxweyne Xasan Sheekh..?